Okpomọkụ na iru mmiri ịgba ígwè ule - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
A na-eji ule na-agba ịnyịnya ígwè na mmiri iji nwalee ma chọpụta oke na arụmọrụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe site na mgbanwe nke okpomọkụ na iru mmiri dị ka n'okpuru nnukwu okpomọkụ na iru mmiri ma ọ bụ obere okpomọkụ na iru mmiri.
Mgbanwe gburugburu ebe obibi na ihe dịka okpomoku na iru mmiri na-emetụta ihe na arụmọrụ ngwaahịa. Anyị na-ebute ule a site na imikpu ngwaahịa ma ọ bụ ngwa na gburugburu ebe obibi, na-ekpughe ngwaahịa na oke okpomọkụ dị elu, jiri nwayọ belata na obere okpomọkụ, wee laghachi na nnukwu okpomọkụ. Enwere ike imeghari usoro a n'ihe banyere nnwale a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
Jera gaba ule a n'okpuru ngwaahịa
-FTTH Fiber optic dobe USB
-Insulation ịkpọpu akụkụ njikọ IPC）
-FTTH dobe eriri clamps
-Anya clamps ma ọ bụ gwara na-akwado
-ABS eriri mwekota
Ule a na-ahụkarị nke ụkpụrụ na-ezo aka na IEC 60794-4-22, EN-50483: 4, NFC-33-020, NFC-33-040.
Anyị na-ere ngwaahịa karịa mba 40 n'ụwa, mba ụfọdụ nwere oke elu ma ọ bụ obere okpomọkụ, dị ka Kuwait na Russia. Ọzọkwa mba ụfọdụ nwere mmiri ozuzo na-aga n'ihu na oke iru mmiri dịka Philippines. Anyị kwesịrị ijide n'aka na etinyere ngwaahịa anyị n'ọnọdụ ihu igwe dị iche iche yana nnwale a nwere ike ịbụ ezigbo nyocha maka arụmọrụ ngwaahịa.
Ule ule na-eme ka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche dị iche iche, ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche nke akụrụngwa bụ + 70 ℃ ~ -40 ℃ na iru mmiri dị elu bụ 0% ~ 100%, nke na-ekpuchi ọtụtụ gburugburu ebe obibi ụwa. Anyị nwekwara ike ijikwa ọnụego nke okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri na ịrị elu na ọdịda. Enwere ike ịdepụta ihe nyocha ahụ chọrọ ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri iji zere mmejọ mmadụ ma hụ na izi ezi na izi ezi nke nnwale ahụ.
Anyị na-eme ule a na ngwaahịa ọhụrụ tupu ịmalite, maka njikwa mma kwa ụbọchị.